Ciidamadda OIL PROTECTION UNIT Somaliland Usamaynayso Ilaalinta Shirkaddaha Shidaalka Oo Ay Ku Baxayso Lacag Dhan $25 Million |
Ciidamadda OIL PROTECTION UNIT Somaliland Usamaynayso Ilaalinta Shirkaddaha Shidaalka Oo Ay Ku Baxayso Lacag Dhan $25 Million
Waxa beryahan la hadal hayey ciidamada xukuumadda Silaanyo muwaadaniinteede ay u samaysanayso ee loo bixiyey Oil Protection Unit. Kharashka ku baxaya ciidankaa xaaranta ahi waa $25 Million! Waxa aad moodaa in RRU, SPU, Booliskii, iyo xooggii dalku ku filaan waayeen sugidda boobka qaranka. Hadaba reer Somaliland ha is weydiiyeen cadowga wadanka jooga ee loo samaysanayo ciidankani waa ayo? Khayraadka dalka yaa laga ilaashanaya? Kuwa samaysanaya ciidamadan waa beel keliya, kuwa qaranka boobaaya waa isla iyagii. Waxa aad maanta umadda reer Somaliland ku samaynaysaan miyaad ilowdeen in aynu 10+ sano ka dagaalamaynay oo aynu iska xoraynay?
Ciidankan waxa laga qortay beelo gaar ah oo lagu kalsoon yahay hana u badnaadeen beesha Ra’iisul wasaaraha ( aka wasiirka madaxtooyada ). Xukuumadu nabad gelyo la’aanta waxay ku tilmaantay in Alshabaab iyo dad horumarka ka soo hojeeda ay masuul ka yihiin. Hore ayaa tan oo kale inoo soo martay oo xukunkii keligii taliska ahaa ee Siyaad Barre ba ciidamo fara badan oo mid walba rag uu ku kalsoon yahay ay hogaaminayaan ayuu sameeyey. Caadadatan ciidamo kala duwan oo cid ay ka amar qaataan aan la aqooni waa kuwa keligii taliyuhu afka ugu dhaco. Saddam Xuseen baa Republican Guards samaystay, Qadaafi ayaa markii uu raggii aamini waayey unugyo dumar ah oo ilaaliya samaystay, maalintii la qabtayna gacantii dadkii uu cadaadin jiray ayuu ku baxay.
Shirkada loo xilsaaray ciidankan in ay taba barto waxa la yidhaahdaa Assaye Risk ltd, waxa director ka gabadh la yidhaahdo Arabella Wickham oo ingriis ah. Ciidanka tiradiisu waa 420, nimaka taba barayana waa caloshooda u shaqaytayaal hore Ciraaq iyo Afghanistan uga soo dagaalamay. Assaye Risk ltd iminka Central Africana cagaha ayey kula jirtaa.
Hadaba ragga ciidamadan ka danbeeya, Wasiirka Macdanta, Wasiirka Arrimaha Dibeda, wasiirka arrimaha gudaha, nimankii Genel Energy kula soo heshiiyey sidii dadkooda loo xasuuqi laha iyo Wasiirka madaxtooyada oo u xilsaaraa in beelo lagu kalsoonyahay ciidanka laga soo qoro, ha ogaadeen in wixii dhibaato ah ee ay ciidamadaaasi u geystaan muwaadiniinta dhulkooda la boobaayo, in iyaku ay masuul ka noqonayaan. Dadaalna aanu u gelayno sidii “War Criminals” loogu soo oogi laha. Waxaad u barateen shicibka maalin kasta RRU-du xasuuqayso, weliba kuwiina Passports ajaanibka ah sitow wadamada aad ka sidataan sharciyo adag ayaa ka yaalla. Dhiiga aad daadisaana wuxuu hoos imanaya nooca War Crimeska. Ma maqasheen Charles Taylor iyo Blood Daimond? Tani waxay noqonaysaaSIILAANYO IYO BLOOD OIL.
Reer Somaliland maanta ayey talo la gudboontahay ee ha tashadeen oo wadankan iyo dadkiisa sidii looga saari laha mugdigan ay galeen iyo wixii aynu ka dagaalanay ha laga tashado. Xusbiga talada haya ee Kulmiye beri hore ayuu dhintay, waxa la isku haystaana waa raqqdiisii. Madaxweynuhu shantii hore ayuu wadi kari waayey ee shan kale diyaar looma aha ee ha ka tashado meesha. Haddii kale waxa imanaysa inDHENGEDII cid loo xilsaaro. Ninka maanta $25 Million iyo ka badan ugu tala galay xasuuqa dadkiisa ma istaahillaa in markale la soo doorto?
Tan kale ee isweydiinta lihi waxa weeye dhulkan wax weyn baa lagu ogyahay, markaa maanta oo aan waxba lahayn ninka intaas oo ciidan ah kuu samaystay berri haduu Shidaal iyo lacag kugu helo maxaad ka filaysa? Waxa inagu khasab noqonaysa in ninkastaaba uu dhulkiisa iyo deegaankiisaba ilaashado.
Muwaadiniinta Reer Somalilandow hoos akhriya. Waa calooshooda u shaqaytayaasha la soo kiraystay.